Starburst ဆုကြေးငွေလှည့်ခြင်းများ၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်အခွအေန |
Starburst ဆုကြေးငွေစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များ spins:
ဒီဆုကြေးငွေအကြားတက်ကြွဖြစ်လိမ့်မည် 00.01 ကြာသပတေးနေ့ 12 မေလနှင့် 23.59 ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ 18 မေလ 2016 (ဂရင်းနစ်စံတော်ချိန်).
ထိုမြှင့်တင်ရေးကာလအတွက်£မှ 50 အထိကစားသမားသိုက်သူတို့လက်ခံရရှိပါလိမ့်မည် အကယ်. 10 အခမဲ့ Starburst ပေါ်မှာကစားရန် spins. £ 50,01 နှင့်£ 100 အကြားရှိကစားသမားသိုက်ထို့နောက်သူတို့လက်ခံရရှိပါလိမ့်မည် အကယ်. 50 အခမဲ့လှည့်ခြင်းများ. ထိုမြှင့်တင်ရေးကာလအတွင်းကစားသမားသိုက်ထက်ပို£ 100,01 လျှင်သူတို့လက်ခံရရှိလိမ့်မည် 100 အခမဲ့လှည့်ခြင်းများ. ဤရွေ့ကားလှည့်ဖျား 10p တန်ဖိုးရှိဖြစ်လိမ့်မည်.
သာကဤဂိမ်းအပေါ် wagering: Starburst, Gonzo ရှာပုံတော်, အမွှာလည်, Spinata Grande, ထုချွန်းပုံ, piggy စည်းစိမ်ဥစ္စာသည်, South Park, ဂျက် Hammer, ချိတ်သူရဲကောင်းများ, ငါ့ကို dazzle, နီယွန် Stax, Dracula, ဂျက်နှင့် The Beanstalk, အောင်မြင်သော, ရက်ကြောင့်မှားယွင်း Rush, အလင်းအိမ်, ဒစ္စကိုလှည့်ဖျား, Koi မင်းသမီး, ဒဏ္ဍာရီလာအိမ်ထောင်မကျခင်, Sparks, စတစ်ကာများ, မှော် Portal, Blackjack Classic, အသီးဆိုင်, ပန်းပွင့်, မျှော်စင် Steam, Fisticuffs, ကံကောင်း Angler, လေဆင်နှာမောင်းခြံနဲ့ Escape, Subtopia, ဂျက် Hammer 2, ဘစ်ဘန်း, invisible က Man, South Park2ရက်ကြောင့်မှားယွင်း Chaos, slot ဘုရင်, ဂြိုလ်သား, တောက်ခြင်း, Guns N Roses, နက်နဲသောအရာဖြစ်ပေ၏မဟာ, ဒရိုက်ဗ်အာမခံလိုအပ်ချက်များ၏လျှော့ချရေးဆီသို့ဦးတည်ရေတွက်ပါလိမ့်မယ်.